Kulamada La Ciyaari Doono Maalmaha Jimcaha, Sabtida Iyo Axada Horyaalka Premier League Ayaa Mar Kale Baaqan Doona Dabaylaha Laga Cabsi Qabo Dartood? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Horyaalka Premier League ayaa mar kale halis ugu jira cimilada oo xumaanaysa waxaana soo baxday digniin cusub oo muujinaysa in kulamada soo socda ee Premier league markale la baajin karo.
Xafaasika saadaasha hawada UK ee Met Office ayaa soo saaray digniin hurdi ah oo lagu sheegay in maalmaha jimcaha, sabtida iyo axada ay jiri doonaan dabaylo xawaare dheeraynaya ku socda iyo waliba roobab taas oo halis galinaysa kulamada soo soda ee Premeir league.
Dhawaan waxaa kulamo Premier league ah loo baajiyay dabaylihii Storm Ciara laakiin waxaa hadda la xaqiijiyay in UK ay ku soo aadan tahay dabaysha Storm Dennis oo roob wadata taas oo halis markale galinaysa ciyaaraha horyaalka Ingiriiska.
Kooxda Southampton ayaa booqan doonta Burnley waxaana ka dib sabtida kulan wada ciyaari doona kooxaha Liverpool iyo Norwich City waxayna ka mid yihiin kulamada ay dabaylaha soo socdaa halis galin karaan.
Axada kooxaha Aston Villa iyo Totenham ayaa wada ciyaari doona halka Arsenal iyo Newcastle United ay London ku kulmi doonaan laakiin kulanka ugu adag ayaa isniinta dhex mari doona Manchester United iyo Chelsea kaas oo ay suurtogal tahay in uu halista dabaylaha ka badbaadi karo.
Dabaysha Storm Dennis ayaa la sheegay in ay ku socoto 60 mitir saacadiiba isla markaana waxaa la filayaa in ay la socdaan baraf iyo roob iyada oo dabayshii ka horaysay ee Storm Ciara ay koronto la’aani ku dhacday 20,000 kun oo qof inkasta oo xawaaraheedu ahaa 97 mitir saacadiiba.
Wali ilaa hadda lama ogaan karo haddii kulamada Premeir League iyo jimcaha, axada iyo sabtida loo baajin doono dabaylaha UK ku soo socda balse walwalka ayay sii kordhiyeen.
Haddii markale xaalada cimilada UK ka jirto loo baahiyo kulamo Premeir League ah waxay sii xumayn doontaa xaalada kooxaha waa wayn ee tartamada kala duwan ee Yurub ku jira.
Kooxaha waa wayn ee Premier League waxay ku jiraan Champions League iyo Europa League, waxaana sii kordhi kara culayska kulamada ay ciyaari doonaan haddii lagu qasbo in la baajiyo kulamada todobaadkan la ciyaari doono.